Raheem Sterling Oo Ka Mid Ah Ciyaartoyda Ay Manchester City Ku Dari Karto Dalabka Harry Kane
Home Wararka Ciyaaraha Raheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda ay Manchester City ku dari...
Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu kamid yahay ciyaartoyda Manchester City ay dooneysa inay qeyb uga dhigto heshiiska kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane xagaagan.
Ka dib markii Kane uu muujiyay rabitaankiisa inuu ka tago kooxdii uu ku soo barbaaray dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, Citizens ayaa si aad ah loogu sharaxay inay tahay meel cusub oo loogu talagalay weeraryahanka Ingariiska ah, Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu 27 jirkaan keeno Etihad.
Iyadoo dalab 100m ah oo horeyba looga soo diiday, Manchester City ayaa haatan la sheegayaa inay raadineyso inay ciyaartoy ku darto heshiiska ay ku heleyso xidigan.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa la soo warinayaa inay durbaba u diyaarisay Bernardo Silva , Riyad Mahrez iyo Gabriel Jesus inay yihiin xulashooyinka ugu macquulsan ee lagu heli karo heshiis ciyaartoy iyo lacag kaash ah, laakiin sida laga soo xigtay The Mirror , Sterling ayaa ikhtiyaar u ah Citizens inay lumiso si ay u soo qabtaan bartilmaameedkooda.
Dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ah ayay u arka labada naadi isweydaarsiga macquul ahka dib markii ay noqdeen rag muhiim u ah safarkii England ee finalka Euro 2020, madaama Sterling uu diiwaangaliyay seddex gool iyo caawiye halka Kane uu dhaliyay afar gool 7 kulan oo uu saftay.
Inkasta oo ololahaas caalami uu ahaa, madaxda Manchester City ayaa loo maleynayaa inay ka niyad jabsan yihiin qaab ciyaareedka Sterling ee Premier League, iyadoo ciyaaryahanka garabka ka ciyaara uu xoogaa hoos uga dhacay booska koowaad ee Manchester ka dambeeya Phil Foden iyo Riyad Mahrez, isagoo diiwaangashan 10 gool iyo sideed caawin. 31 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii hore.
Iyaga oo diirada saaraya haatan weeraryahan ka dib bixitaankii Sergio Aguero xagaagii, Citizens ayaa haatan lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay u huraan garabka si ay u soo qabtaan Kane
Previous articleManchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Piotr Zielinski
Next articleChelsea Oo Wadahadal La Gashay Wakiilka Robert Lewandowski.